Hambalyo hogaanka cusub Ururka Isbaheysiga Ummadda Somaliyeed ee Sweden - Latest News Updates
Hambalyo hogaanka cusub Ururka Isbaheysiga Ummadda Somaliyeed ee Sweden
Waxa aan hambalyo kal iyo laab ah halkan ugu bogaadinayaa hogaanka cusub ee ay doorteen Ururka Isbaheysiga Ummadda Somaliyeed gaar ahaan Gudoomiyaha cusub Habane Hassan iyo dhamaan xubnaha kale ee golaha fulinta.
Hambalyo Hambalyo waxaan Eebe ka rajeynayaa in uu idiin fududeeyo xilkaculus ee aad u qaadeen Ururka Isbaheysiga Ummadda Somaliyeed(Somaliska Risksförbundet i Sverige).
Waxa aan halkan ammaan aan la sookoobi karin ugu jeedineynaa gudiga doorashada ee Ururka Isbaheysiga ummadda Somaliyeed iyo inta kala soo shaqeysay hoosha doorashada quruxda badan ee ay SRFS xilka ku kala wareegeen oo hogaankii hore ay si dimuquraadi ah xilka ugu wareejiyeen hogaanka cusub ee la doortay.
Waa mid mudan in waxa laga barto fariincadna u direeyso kuwa damaca guracanugu jiro in Ummadda Somaliyeed kala geyaan, sidoo kale waxeey xaqiiqo u tahay in Uururka Ummadda Somaliyeedyahay urur qof kasto Somali ah waxa ka leeyahay .
Jaaliyada Somalia- och Sverige Vänskapsförening (Göteborg)
Waxaan dhiirigalineynaa doorashada iyotubta wanaagsan ee ay qaadeen UrurkaIsbaheysiga Ummadda Somaliyeed .
Waa hormar iyo muujin midnimadaSomaliyeed ee ku dhaqan wadankaSweden waxaan alle ka baryeynaa in hogaanka cusub in alle la garab galomasuuliyada culus ee qadeen waan ka shaqeen donaa insha allah.
(Somalia- och Sverige Vänskapsförening)